Donald Yamamato oo ku wareeray Siyaasadda Somalia “Saacadaha soo socda ayuu is casili doonaa” Sababta ogoow. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Danjiraha Dalka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, ayaa qorsheynaya in uu iska casilo xilka danjiranimo ee Mareykanka uu uga hayo Soomaaliya.
Wargeyska Foreign Policy ayaa daabacay warbixin dheer oo ka faallooneysa waxyaabaha ku gedaaman is casilaadda Danjire Yamamoto.
Wargeysku waxaa uu sheegay in sababta ugu weyn ee uu isu casilayo tahay hanaanka deyn cafinta Soomaaliya oo ay u badantahay in aysan suuro gelin.
Sida uu qoray Foreign Policy xisaab xirka Miisaaniyadda Mareykanka ee dhamaadka sanadkan laguma muujin in Mareykanka uu cafinayo deynta uu ku leeyahay Soomaaliya oo gaareysa ilaa $1Bilyan oo doollarka Mareykanka ah.
Wasaaradaha Maaliyadda iyo Arrimaha dibadda Mareykanka oo uu wargeysku kala xiriiray arrintan ayaa ka gaabsaday in ay ka jawaabaan.
Donald Yamamoto, ayaa dadaal xoog leh ugu jira in dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya ee ay soo wadday dowladda Soomaaliya lagu gaaro in ay Soomaaliya hesho deyn cafis dhameystiran.
Waddamada deymaha ku leh Soomaaliya ayaa daba safan Mareykanka,waxaana ay ku xireen in haddii uu cafiyo Mareykanka ay iyana cafin doonaan.
Waxaa ay Khubarro ka tirsan Dowladda Mareykanka u sheegeen in Wargeysku in Wasaaradda Maaliyadda aysan xisaab xirkeeda iyo miisaaniyadda cusubba ku derin in deymaha Mareykanka laga cafinayo Soomaaliya.
Waddamada ku bahoobay (aragtida waddanka deynta culus lagu leeyahay ee Faqriga ah HIPC), ayaa sheegaya in tallaabada Mareykanka uusan deynta uga cafineyn Soomaaliya dhabar jab ku tahay dadaalladii ay wadday dowladda Soomaaliya ee dib u habeynta dhaqaalaha.
Donald Yamamoto, ayaa isku dayaya in Baarlamaanka Mareykanka loo gudbiyo qaraarka ogolaanaya in deynta laga cafiyo Soomaaliya, haddiise ay dhici weyso waxaa u qorsheysan in uu xafiiska banneeyo sida saraakiil ka mid ah Maamulka Trump u sheegeen Wargeyska Foreign Policy.
Wasaaradda Maaliyadda ayaan u muuqan in ay qorsheyneyso in qaraarkaas u gudbiso Baarlamaanka Dalka Mareykanka,hayeeshee khubarrada waxaa ay sheegayaan in Mareykanka uu raadinayo aragti kale oo Baarlamaanka Mareykanka lagu horgeeyo qorshaha deyn cafinta Soomaaliya.
Wargeysku waxaa uu sheegay in haddii uu fashilmo qorshaha deyn cafinta Soomaaliya ay taasi dhabar jab weyn ku tahay Ra’isalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo Mareykanka kala shaqeynayay barnaamijkan.
Billowgii sanadkan Midowga Yurub, Dowladaha UK iyo Qadar ayaa ballanqaaday in ay bixinayaan $150 Milyan oo ka mid ah $330Milyan oo ay IMF ku leedahay Soomaaliya, sidoo kale Dowladda Norway ayaa ballanqaadday in ay bixineyso$360Milyan oo Bangiga Adduunka ku leeyahay Soomaaliya.
Previous articleHub iyo agab kale oo muhiim ah ayaa lagala baxay Xerada Hiilwayne Kadib dagaalkii Xalay ay ku qaadeen Alshabaab.
Next articleSAWIRO:- Shacabka Puntland oo Seddex Todobaad kadib helay halka uu joogo Madaxwaynahooda oo ay ku wareersanaayeen Waayihii dambe.